Raspberry Pi တွင် Netflix ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
Raspberry Pi သည်လူအများအတွက် minipc သို့မဟုတ်အရန်ကွန်ပျူတာအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏ဝေဖန်သူများက၎င်းသည်အချို့သောအရေးကြီးသောစစ်ဆင်ရေးများအတွက်စွမ်းအားလုံလောက်သောပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်ဟုအမြဲဆိုကြသည်။ ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်များ (သို့) အားကောင်းတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်။
ဤသင်ခန်းစာတွင် Netflix နှင့်မည်သို့ကြည့်ရှုမည်၊ Netflix နှင့်တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်အခြား streaming video service များကိုမည်သည့်ပြင်ပမှ hardware နှင့်အသုံးမပြုဘဲ (သို့) Raspberry board ကိုအသုံးမပြုဘဲသင့် Raspberry Pi တွင်မည်သို့ပြောရမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ Raspberry Pi တွင် Netflix ရှိရန်မိုက်မဲသောဖောက်သည်လည်ပတ်မှုကိုသုံးသည့်နည်းလမ်းအချို့သည် Raspberry Pi ဘုတ်ကိုအတိအကျမလိုအပ်သော်လည်းအခြားဖန်သားပြင်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည့်အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုလိုအပ်သည်။
Netflix သည်အကြောင်းအရာနှင့်စျေးနှုန်း / အရည်အသွေးအချိုးအစားတို့ကြောင့်အတော်လေးရေပန်းစားသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးမျိုးသောပလက်ဖောင်းများတွင်အသုံးပြုသည့်အခါ၎င်းသည်အလွန်တင်းကျပ်ပြီးတောင်းဆိုမှုများရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောရမည်။ ၎င်း၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုစမတ်ဖုန်းများ (သို့) root ရှိသည့်တက်ဘလက်များတွင်တပ်ဆင်။ မရပါ။ Gnu / Linux တွင်အချို့သောပျောက်ဆုံးနေသောစာကြည့်တိုက်များကြောင့်၎င်း၏တရားဝင်လျှောက်လွှာကိုအသုံးမပြုပါ။
Raspberry Pi အား Netflix သို့မဟုတ်အခြားအလားတူရွေးချယ်စရာများမှအကြောင်းအရာကိုကစားရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
ဒါပေမယ့်အရင်ကြည့်ရအောင် ကျွန်ုပ်တို့ Raspberry Pi ကိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်စေရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစာရင်း LCD monitor ပေါ်တွင်သာမကအိမ်တွင်းရုပ်မြင်သံကြားသို့မဟုတ်အခြားအလားတူကိရိယာများတွင်ပါပါ ၀ င်သည်။
32 Gb (သို့) Class 10 Microsd ကဒ်
HDMI ကေဘယ်လ် (ပုံသေ S-video) ။
Raspberry Pi3ဘုတ်အဖွဲ့။
အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှု။ (အကယ်၍ ကြိုးတပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် Ethernet cable လိုအပ်လိမ့်မည်။ )
Raspbian ISO ပုံရိပ်။
1 နည်းလမ်း ၁ - Firefox ကိုအသုံးပြုခြင်း
2 နည်းလမ်း ၂ - Chrome နဲ့ ExaGear ကိုသုံးတယ်
3 နည်းလမ်း 3: Netflix အတွက်ခရိုမီယမ်
4 နည်းလမ်း 4: Kodi Add-on ကို
5 နည်းလမ်း 5: စကားမပြောနိုင်သောလိုင်း
6 အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ
နည်းလမ်း ၁ - Firefox ကိုအသုံးပြုခြင်း
ဗားရှင်းအသစ် Mozilla Firefox သည် Netflix ဝဘ် application ကိုခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့ပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် command ကို အသုံးပြု၍ Raspbian တွင်သာသွင်းရမည်။
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် web browser ကို install လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi တွင် Netflix ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလိမ့်မည်။ ဤနည်းလမ်းသည် Netflix အတွက်တည်ရှိပြီးသူတို့တွင်အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အရိုးရှင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများစွာအတွက်သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ Chrome ကိုကြိုက်ပါက၎င်းသည်ဝေးလံသောဝေးလံသောဘရောင်ဇာများမဟုတ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြ,နာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ Mozilla Firefox ၏တရားဝင် version ကိုတရားဝင် Mozilla repositories မှတပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် terminal တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးအောက်ပါတို့ကိုရေးပါ။
နည်းလမ်း ၂ - Chrome နဲ့ ExaGear ကိုသုံးတယ်
ExaGear ကုမ္ပဏီသည် software အတွက်ဖန်တီးထားသည် Raspberry Pi ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် x86 ပလက်ဖောင်းပေါ်လျှောက်လွှာများကိုအသုံးပြုပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ငါတို့ install လုပ်ပြီး run ရတယ်။ ထို့နောက် Netflix ရုပ်ရှင်နှင့်စီးရီးများကိုကြည့်ရှုရန် Windows အတွက် Chrome ကို default browser အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ExaGear ဆော့ဖ်ဝဲကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည် ဒီ link ကို။ ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ package ကို unzip လုပ်ပြီး installation file ကိုအောက်ပါအတိုင်း run ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့အောက်ပါအတိုင်း execute လုပ်ရမည်။
ငါတို့သည်ဆော့ဝဲလ်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန် bug များနည်းနိုင်သမျှနည်း:
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Netflix ဖြင့် Chromium ကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသွားနိုင်သည် Google Chrome ဝဘ် နှင့်တပ်ဆင် deb deb package ကို download လုပ်ပါ။
နည်းလမ်း 3: Netflix အတွက်ခရိုမီယမ်
Chrome နှင့် Chromium တို့သည်တူညီသောပရောဂျက်မှစတင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်တူညီသောအရာမဟုတ်ပါ။ များစွာသောအသုံးပြုသူများသည် Netflix ကို Chrome တွင်ကြည့်ပြီး Chromium တွင်မဟုတ်ပါ။ Epiphany ကဲ့သို့သောအခြား browser များကဲ့သို့ ပြproblemနာက browser စာကြည့်တိုက်များနှင့် DRM နှင့်ဒြပ်စင်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် Chromium တွင်ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိပြီး၎င်းတွင်အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Raspbian အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Chromium version ကို download လုပ်ရပါမယ်။ Terminal မှာအောက်ပါတို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနောက်ဆုံးပေါ် Chromium ဗားရှင်းကို install လုပ်ပြီးသောအခါ Raspberry Pi ကဲ့သို့ပလက်ဖောင်းများအတွက်အလွန်အရေးကြီးပြီးစိတ် ၀ င်စားသော tool တစ်ခုထည့်ရမည်။ အဆိုပါ Browser ကိုအေးဂျင့်စိတ်ကြိုက်။ ဤပလပ်အင်ကကျွန်ုပ်တို့အားဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာမှဝဘ်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများသို့ပေးပို့သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုသည်။ ဒီဘရောင်ဇာအတွက်ပလပ်အင်ကိုရနိုင်သည် ဒီမှာ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာအရာအားလုံးရှိပြီဆိုတာနဲ့အေးဂျင့်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန် (သို့) အေးဂျင့်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးအောက်ပါအချက်အလက်များကိုထည့်ပါ
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ Agent ကိုရွေးချယ်ပြီး Netflix စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပါ။ ထို့နောက် ၀ န်ဆောင်မှုသည်မည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုလိုက်ဖက်ညီမှုပြwithoutနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်
နည်းလမ်း 4: Kodi Add-on ကို
ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပစ္စည်းများမှာ Raspbian ISO image ကို microsd card တွင်ထည့်သွင်းရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်၊ Raspberry Pi အတွက်ဗားရှင်းပြောင်းပါ.
Kodi က Raspberry Pi ကို center ည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်းမှာရှိတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားမှာသုံးနိုင်တဲ့ multimedia စင်တာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မီဒီယာစင်တာတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုစမတ်တီဗီလုပ်တာ.
Netflix သည်ယေဘုယျအားဖြင့် Kodi အတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းမရှိပါ။ Netflix သည်ဝက်ဘ်အက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်သော့လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်ရပ်ရွာဖန်တီးထားသည် Raspberry Pi တွင် Netflix ကိုသုံးရန်ဖြစ်နိုင်သည့် Kodi အတွက် add-on တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ add-on ကို download လုပ်ရုံပဲရတယ် ဒီ Github repository ကို နောက်ပြီး system တစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့ Kodi ကိုထည့်သွင်းပါ။ ပြီးနောက်တွင် Netflix သို့ဖြတ်လမ်းပေါ်လာလိမ့်မည်။
နည်းလမ်း 5: စကားမပြောနိုင်သောလိုင်း
ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်လုံးတွင်သူနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးအမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် များစွာသောအသုံးပြုသူများအတွက်နေဆဲတရားဝင် option ကို။ Raspberry Pi သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစကားမပြောနိုင်သော client system နှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆာဗာမှ Netflix ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ် Netflix application ကိုဖွင့ ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi မှတဆင့်အဝေးမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်အသုံးဝင်သောပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိမ့်မည် TeamViewer.
TeamViewer ဆိုသည်မှာကြီးမားသော configurations သို့မဟုတ် network administrator နှင့်ဆင်တူသည့်အရာများမလိုအပ်ဘဲဤ application ရှိမည်သည့်ကွန်ပျူတာနှင့်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမည့် program တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Windows Chrome သို့မဟုတ် Microsoft Edge ရှိသည့်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုသည် TeamViewerထို့နောက် Raspberry Pi မှ desktop ကိုအဝေးကနေစီမံမည်။ ဤနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry Pi အတွက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်၊ ပင် Rpberry ဘုတ်၏စွမ်းအားနိမ့်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ပြန်ဖွင့်ခြင်းပြproblemsနာများအများဆုံးတွေ့ရလိမ့်မည်။
အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများ
ယခု ကျွန်ုပ်တို့၏ Raspberry နှင့်လိုက်ဖက်သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများရှိသည် - အားလုံးနီးပါး။ Netflix ၏ဖောက်သည်များအားအမြင်အာရုံပါ ၀ င်မှုကိုဖော်ပြရန်လိုက်နာသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြိုင်ဘက်များစွာကအထူးသီးသန့်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်အပလီကေးရှင်းများကအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် Raspberry Pi နှင့်ပconflictsိပက္ခဖြစ်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။ အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရလျှင် Raspberry Pi သည်အခြားပြိုင်ဘက်ဖြစ်သော Netflix ၀ န်ဆောင်မှုကို Rakuten TV, Amazon Prime သို့မဟုတ် HBO ကဲ့သို့ကစားနိုင်သည်။
ဤနည်းလမ်းများသည် Netflix သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အခြားနည်းလမ်းကိုမဆိုကြည့်ရှုသောအခါအထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ် Mozilla Firefox ရွေးစရာသို့မဟုတ်၎င်းပျက်ကွက်လျှင် Kodi ကိုအသုံးပြုခြင်း, အရင်းအမြစ်များနည်းပါးသောသုံးစွဲမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်၎င်းကိုအွန်လိုင်းဖျော်ဖြေရေး ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းသောအချိန်များဖြစ်စေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြော်ငြာများပါသည့်ရုပ်မြင်သံကြားအဟောင်းထက် ပို၍ မှန်ကန်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းအဲဒီလိုမထင်ဘူးလား
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » Raspberry Pi » Raspberry Pi တွင် Netflix ကိုဘယ်လိုကြည့်ရှုမလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် Chromium အား add-on ဖြင့်ပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သောတစ်လက Netflix က၎င်း၏လိုက်ဖက်တဲ့အရာကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီး Netflix ကိုကျွန်ုပ်၏ RaspberryPi3 တွင်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်မပြုပါ။ လွန်ခဲ့သောတစ်လတိုင်အောင် Netflix ကို Chromium နှင့် Netflix နှင့်ပြသနာများမရှိဘဲတွေ့မြင်နိူင်သည်။ Launcher ။
Netflix ကတစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားပြီလို့ထင်တယ်၊ အချို့သောအပြောင်းအလဲကိုဖြည့်စွက်မှုလုပ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်အခုလိုက်ဖက်တဲ့အရာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ငါ Linux သို့မဟုတ် Raspberry ကနေ။ တစ်စုံတစ်ခုကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားနေတာပဲ။ ကြိုတင်မဲအလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါသည်လည်း raspix ကို netflix မမြင်ရသောကြောင့်သင်တို့ကဲ့သို့ငါဖြစ်၏
ကျွန်ုပ်သည် Netflix ကို Raspberri Pi တွင်စီးဆင်းရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီ။ ငါ blog ကိုမှ link ကိုပူးတွဲပါ။
Orlando တွင် Gutierrez ဟုသူကပြောသည်
Orlando Gutierrez အားပြန်ပြောပါ
ကျေးဇူးပြု၍ နည်းလမ်း ၃ ဖိုင်၏ပြင်ဆင်မှုလမ်းကြောင်းကိုသင်ပြနိုင်ပါသလား။
ဒီ adapter ကို ကျေးဇူးတင်၍ သင်၏ Nintendo ခလုတ်ကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကစားပါ